Ukuvimbela izifo ezithathelwanayo zokuphefumula
ngu admin ngo 20-04-02
Imaski evikelekile ingenye yezindatshana zokuvikela eziphumelelayo ukuvikela izifo ezithathelwanayo zokuphefumula, ezidlala indima ebalulekile ekulawuleni nasekuvikelekeni kwezifo eziwubhubhane. Kubaluleke kakhulu ukuhlangabezana namazinga wezinsizwa eziphefumulayo ukuze kuqinisekiswe impilo nokuphepha kwabantu. Uma sekukhona ...
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwesimo sobhubhane, ukusetshenziswa kwamamaski kukhuphuke kakhulu. Njalo lapho kukhiqizwa imaski kuvikela ukuphepha okwengeziwe kubantu nakubasebenzi bezokwelapha. Iminyango enekhono kanye namabhizinisi wokukhiqiza ahlobene nawo agijimisana nesikhathi. Ngokuvumelana ne ...